Maamulka DKMG ah ee Gobolka Gedo oo ku baaqay Gargaar lala soo gaaro Dadka Tabaaleysan – SBC
Maamulka DKMG ah ee Gobolka Gedo oo ku baaqay Gargaar lala soo gaaro Dadka Tabaaleysan
Qaar ka tirsan masuuliyiinta Dowlada KMG ah ee Soomaaliya ee ku sugan gudaha gobolka gedo ayaa waxay u direen fariimo ku aadan gar gaar gaarsiin hay’adaha samafalka .
Waxay heegeen masuuliyiintaasi in beesha caalamka iyo hay’adaha samafalka gargaarka bixiya in gobolka Gedo gaar ahaan gudaha degaamada waaweyn ay soo gaarsiiyaan gar gaar deg deg ah taas oo wax looga qabanayo xaaladaha macluusha ah ee heysata dadka barakacayaasha ah ee halkaasi ku sugan.
Buule Aadan Axmed Qalooc waxa uu ka mid yahay saraakiisha matalaya DKMG ah ee ku sugan gobolka Gedo ayaa mar uu la hadlayay warqabadka SBC ee gobolkaas waxa uu sheegay in loo baahanyahay hay’adaha samafalka Qaramada Midoobay ay gobolka soo gaarsiiyaan gar gaar deg deg ah.
Waxa uu intasi raaciyay in Amaanka gobolka inta ay gacanta ku hayaan Dowlada KMG ah uu yahay mid aad u wanaagsan islamarkaana ay ballan qaadayaan amaanka Hay’adaha Samafalka.
Gobolka Gedo aya waxa uu ka mid yahay gobolada ay ka jirto abaarta ba’an ee ka taagan gudaha dalka iyadoo ay intaasi u dheertahay dagaalo mudooyinkii dambe halkaasi ka dhacayay oo saameyb buuxda iyaguna ku keenay dadka gobolka.
sikastaba ha ahaatee Baaqan ka soo baxay Maamulka gobolka Gedo ee Dowlada KMG ah ayaa imanaya xili ay soconayaan gurmad aad u sareeya oo ay wadaan hay’adaha samafalka iyo wadamada Caalamka .